ကြောက်စရာဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ သကြား - Hello Sayarwon
သကြားလုံးစားမယ်……ဂျယ်လီစားမယ်ဆိုပြီး ငိုနေတိုင်း ကလေးငြိမ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး ကျွေးလိုက်ဖို့များစဉ်းစားနေလား။ ဒါက ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လတ်တလောအဆင်ပြေသွားနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ကလေးမှာရော အုပ်ထိန်းသူမိဘတွေမှာပါ ထိခိုက်မှုတွေ အများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးဆိုတာကတော့ အချိုကြိုက်မှာပါပဲ။ မေမေ့ဗိုက်ထဲက ထွက်လာကတည်းက မေမေ့နို့ချိုချိုကိုသောက်ပြီး အာဟာရဖြည့်တင်းခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖို့ ပထမဆုံးသူခံစားမိတဲ့ အချိုအရသာကိုကြိုက်တာ အဆန်းတကြယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ပထမဆုံးသူခံစားမိခဲ့တဲ့ မေမေ့နို့ချိုက သဘာဝအချိုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကလေးကအရွယ်ရောက်လာတ့အခါ သူ့စိတ်ကြိုက်စားမိတာတွေက ပြုပြင်ထားတဲ့အချိုတွေဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်စေတယ်ဆိုတဲ့စကားက ပြောတော့သာဘာမှမဟုတ်တယ် ဒီနောက်ဆက်တွဲကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခံစားရတဲ့အခါ တော်တော်လေးတော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
အချိုဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တာမှန်ပေမယ့် အများကြီးစားမိရင်မကောင်းတာအမှန်ပါ။ နောက်တစ်ခုက သကြားက စွဲလမ်းစေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ အချိုစားတဲ့အခါ စားပြီးရင်းစားချင်လို့ အတောမသတ်တော့တာသာကြည့်တော့လေ။ အချိုရည်သောက်တာ၊ သကြားလုံး၊ဂျယ်လီ၊ ကွတ်ကီး၊ Malted Drink တွေကနေစလို့ အခွံလှလှလေးတွေနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ကလေးကြိုက်မုန့်တော်တော်များများက အချိုပါဝင်မှုမနည်းကြပါဘူး။ ဒီစားစရာတွေကို ပုံမှန်စားသုံးတဲ့အခါ ကလေးတစ်ယောက်စားမိတဲ့ သကြားပမာဏက ဘယ်နည်းပါတော့မလဲ။
ကလေးတစ်ယောက် သကြားစားမိနိုင်မယ့် နည်းအသွယ်သွယ်
ကလေးဆိုတာမျိုးက စားလိုက်ရရင်ချိုနေမှ စိတ်ပျော်တတ်ကြသူလေးတွေပါ။ ဒီတော့သူတို့ဘာတွေများစားမယ်ထင်လဲ။
အသင့်သောက် malted drink လေးတွေပေါ့။ ဒါတွေအပြင် ရေခဲချောင်း၊ ရေခဲထုတ်၊ရေခဲခြစ်၊ ရေခဲသုတ်နဲ့ ယိုအမျိုးမျိုးကိုတောင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စားတတ်တဲ့ ကလေးတွေရှိဦးမှာပါ။
သကြားစားခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာများလဲ…….
သကြားစားတာက ရေတိုအတွက်မကောင်းသလို ရေရှည်မှာလည်း ထိခိုက်မှုများတယ်လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းအရင်းက
သကြားအများကြီးစားတဲ့အခါ ကလေးမှာ ချောင်းဆိုးတာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အဖြစ်အများဆုံး သကြားစားခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ပေါ့။
သကြားလုံးတွေ၊ အချိုပါတဲ့စားစရာတွေက သွားမှာကပ်ပြီး သွားကိုသေချာမသန့်ရှင်းမိတဲ့အခါ သွားပိုးစားတာ၊ သွားကိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးက တစ်ချိန်လုံးမုန့်အချိုတွေပဲစားမယ်၊ ထမင်းကို ကောင်းကောင်းမစားဘူး။ ကလေးစားပြီးရော ကျွေးမိမယ်ဆိုရင် အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ကလေးက လုံလောက်တဲ့ အာဟာရကိုမရတော့ဘဲ အာဟာရချို့တဲ့မှုကိုခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သကြားမှာ အဆီဓာတ်ပဲပါဝင်ပြီး အာဟာရတန်ဖိုးပါဝင်မှုမရှိတာကြောင့်ပါ။ ဒါကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ ကြီးထွားဖွံဖြိုးမှု နှေးသွားတာပေါ့။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်က အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို ငယ်စဉ်မှာ အချိုတွေအများကြီးကျွေးတာက အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို​ မြင့်တက်စေပြီး ဆီးချိုရောဂါကို ခံစားရတာမျိုးအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သကြားအများကြီးစားမိတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုအပ်ဘဲ ဝိတ်တက်လာမှာ အသေအချာပါ။ စားလိုက်တဲ့ အစားအသောက်ချင်းတူတူပဲဆိုရင်တောင်မှ အချိုပါဝင်မှုများနေတဲ့ အစားအသောက်တွေက ဝိတ်တက်တာကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သကြားများများစားမိလေလေ ကိုယ်တွင်းမှာ ကယ်လ်လိုရီ စုပုံမှုက များလာလေလေပါ။ ဒီတော့ ကလေးကို သကြားများများကျွေးနေတာက အဝလွန်ရောဂါဖြစ်အောင် တွန်းပို့နေတာပါပဲ။
အချိုများတဲ့ အစားအစာတွေကို စားတာကက သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကိုများစေပြီး သွေးကြောပိတ်တာအပါအဝင် နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်တာမျိုးအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက အချိုလျှော့ကျွေးတာက တိတ်တဆိတ်လူသတ်သမားရယ်လို့ တင်စားနေကြတဲ့ နှလုံးရောဂါ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်။
သကြားအများကြီးစားတာက ကလေးရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ဆိုရင် သကြားကို လိုတာထက် ပိုမကျွေးပါနဲ့။
ဒါတွေအပြင် သကြားစားသုံးမှုများတာက ကလေးကို ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းထိခိုက်တာ၊ ကင်ဆာ နဲ့ အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကလေးကို အစားအသောက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါ သဘာဝအချိုဖြစ်တဲ့ သစ်သီးတို့ နို့တို့ကို ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ သဘာဝမဟုတ်တဲ့အချိုဓာတ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့စားဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးတာက ကလေးကို ချစ်ရာရောက်သလို အကောင်းဆုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးအောင် ပျိုးထောင်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။
Sugar: How Bad Are Sweets for Your Kids? https://health.clevelandclinic.org/sugar-how-bad-are-sweets-for-your-kids/ Accessed Date 25 November 2019
Too Much Sugar Can Cause Health Problems in Kids https://www.verywellfamily.com/is-too-much-sugar-harmful-to-kids-22337 Accessed Date 25 November 2019
Not So Sweet: New Sugar Limits for Kids Announced https://www.livescience.com/55843-new-sugar-limits-for-kids-announced.html Accessed Date 25 November 2019
Toddlers Are Eating More Sugar Than What’s Recommended for Some Adults https://www.healthline.com/health-news/toddlers-eating-more-sugar-than-recommended-for-adults Accessed Date 25 November 2019
Babies and Sugar: When Should You Introduce Sweets? https://www.everydayfamily.com/blog/babies-sugar-introduce-sweets/ Accessed Date 25 November 2019
သကြားကကျန်းမာအတွက် မကောင်းဘူးလို့ ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
သကြားဆိုတာ သင့်ကလေးကိုအငြိမ်မနေစေတာ ဟုတ်ပါသလား
ကလေးများ တစ်နေ့လျှင် သကြားပမာဏ မည်မျှစားသင့်သနည်း